ရေနံချောင်းမြို့နယ် အတွင်း ရွာနှစ်ရွာ နယ်နိမိတ် အငြင်းပွားရာမှ ပဋိပက္ခဖြစ်ပွားစဉ် စက်လှေမှောက်၊ ရှစ်ဦးသေဆုံး၊ ၂၉ ဦး ပျောက်ဆုံးနေ - Yangon Media Group
ရန်ကုန်၊ ဇူလိုင် ၂၄
ရေနံချောင်း မြို့နယ်အတွင်း နယ်နိမိတ်အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး ရွာနှစ်ရွာ ပဋိပက္ခဖြစ်ပွားကာ စက်လှေမှောက် သဖြင့် လူရှစ်ဦးသေဆုံးပြီး၊ ၂၉ ဦး ပျောက်ဆုံးလျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ရေနံ ချောင်းမြို့နယ်၊ အနောက်ဘက် ၇ မိုင်ခန့်အကွာ ဧရာဝတီမြစ်အနီးရှိ ဖရဲကျွန်းကျေးရွာသားများသည် ဇူလိုင် ၂၃ ရက်၊ ညနေပိုင်းက နယ်နိမိတ်မြေအငြင်းပွားမှုဖြစ်နေသည့် နေရာတွင် ကံသာကျေးရွာမှ နေအိမ်နှစ်လုံးကျူးကျော်ဆောက် သည်ဟုဆိုကာ စက်လှေများဖြင့် သွားရောက်ဖျက်ဆီးရာ တစ်ဖက်နှင့် တစ်ဖက်အပြန်အလှန် ခိုက်ရန်ဖြစ် ပွားကာ ဖရဲကျွန်းကျေးရွာသားများ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်စဉ် ၎င်းင်းတို့ စက်လှေပေါ်သို့တက်ပြေးရာ စက် လှေဟန်ချက်မညီဘဲ ဧရာဝတီမြစ် အတွင်း တိမ်းမှောက်ခဲ့ကြောင်း ရေနံချောင်းမြို့နယ်မီးသတ်တပ် ဖွဲ့ထံမှ စုံစမ်းသိရသည်။
စက်လှေတိမ်းမှောက်မှုကြောင့် ဖရဲကျွန်းရွာသား ၃၉ ဦး ရေနစ် ခဲ့ကြောင်း၊ အခင်းဖြစ်ပြီးနောက် သက်ဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်ရေး၊ ရဲ တပ်ဖွဲ့၊ မီးသတ်တပ်ဖွဲ့တို့မှ ရှာဖွေ ကယ်ဆယ်ရေးများ ပြုလုပ်ခဲ့ ကြောင်း သိရသည်။
ဇူလိုင် ၂၄ ရက် ညနေပိုင်း အထိရှာဖွေမှုများအရ ရွာသား အမျိုးသား ခြောက်ဦး၊ အမျိုးသမီး နှစ်ဦး စုစုပေါင်းရှစ်ဦးကို သေဆုံး လျက်တွေ့ရှိပြီး နှစ်ဦးကို အသက် ရှင်လျက်ကယ်ဆယ်ခဲ့ကြောင်း ရွာသား ၂၉ ဦးမှာ ပျောက်ဆုံးနေဆဲ ဖြစ် ကြောင်း ရေနံချောင်း မြို့နယ် မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ထံမှ သိရသည်။
ရေနံချောင်းမြို့နယ် မီးသတ်တပ်ဖွဲ့မှ မီးသတ်အရာရှိတစ်ဦးက” လူသေအလောင်းရှစ်လောင်းနဲ့ အသက်ရှင်လျက်နှစ်ဦးကို တွေ့ ပါတယ်။ ၂၉ ဦးကို မတွေ့သေးဘူး။ အကုန်လုံးက ဖရဲကျွန်းရွာသား တွေပဲ။ ဖြစ်သွားတာက ဧရာဝတီ မြစ်ထဲမှာ။ ရေပြင်မှာလိုက်ရှာနေ တုန်းပါ” ဟု ဒီမိုကရေစီတူဒေးသို့ ဇူလိုင် ၂၄ ရက်တွင် ပြောသည်။ ကျန်ရှိနေသည့် ပျောက်ဆုံး နေသူများကို အမြန်ဆုံးတွေ့နိုင်ရန် ဆက်လက်ရှာဖွေနေကြောင်း မကွေး တိုင်းဒေသကြီး မီးသတ်တပ်ဖွဲ့မှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောသည်။
ရေနံချောင်းမြို့နယ် အုပ်ချုပ် ရေးမှူးဦးမာန်ကိုဟောက ”မနေ့က ညနေလောက်ကစပြီး ကံသာကျေးရွာနဲ့ ဖရဲကျွန်းကျေးရွာ နယ်နိမိတ် လုတာ နယ်မြေအငြင်းပွားပြီး အ ပြန်အလှန်ခိုက်ရန် ဖြစ်ပွားတာ ပါ။ ဖရဲကျွန်းရွာသူရွာသားတွေက သူတို့ရွာနယ်နိမိတ်ထဲကို ကံသာ ကျေးရွာကနေ အိမ်နှစ်အိမ်ရောက် နေတယ်ဆိုပြီး၊ နေအိမ်နှစ်အိမ်ကို ဖျက်ဆီးတာကနေ ကံသာကျေးရွာ က ရွာသူရွာသားတွေက မခံတော့ အပြန်အလှန် ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ အဲ့ဒီအချိန်မှာ ကံသာ ကျေးရွာက လူအင်အားများလာ တော့ ဖရဲကျွန်းကျေးရွာကလူတွေ တိမ်းရှောင်ပြေးဖို့ လုပ်တာ စက် လှေပေါ် ကြောက်လန့်ပြီး အကုန် လုံး လိုက်တက်တဲ့အခါကျတော့ စက်လှေက မနိုင်ဘဲ ကမ်းနဲ့ မနီး မဝေး ပေ(၂ဝ)၊ (၂၅) လောက်မှာ နစ်သွားတာပါ” ဟု ဒီမိုကရေစီတူ ဒေးသို့ ပြောသည်။
အဆိုပါ ရွာနှစ်ရွာနယ်နိမိတ် အငြင်းပွားမှုသည် လွန်ခဲ့သည့် တစ် နှစ်ကျော်က စတင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ယင်းဖြစ်စဉ်ကို တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ထံ တင်ပြထားကြောင်း သိရသည်။ ပြီးခဲ့သည့် ဇူလိုင် ၁၃ ရက်၊ မွန်းလွဲပိုင်းကလည်း တုတ်၊ ဓား ကိုင်ဆောင်ထားသည်ဆိုသော ဖရဲကျွန်းကျေးရွာသားတို့သည် ¤င်းတို့နှင့်ကျေးရွာချင်း ထိစပ်နေ သည့် ကံသာကျေးရွာအစပ်သို့ သွားရောက်ကာ ပိုင်ဆိုင်မှုအငြင်း ပွားနေသည့်နေရာရှိ တဲများ၊ ခြံ စည်ရိုးနှင့် စိုက်ခင်းများကို ဖျက် ဆီးမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့သေးကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါအမှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး ရေနံချောင်းမြို့မရဲစခန်းတွင်(ပ) ၃၂၆/၂ဝ၁၉၊ အိမ်ကျော်နင်းမှု ပုဒ်မ ၄၅၂၊ ရာဇဝတ်မကင်းသော ကျော်နင်းမှုပုဒ်မ ၄၄၇၊ ညစ် ညမ်းသောပြုလုပ်မှု ပုဒ်မ ၂၉၄၊ အကျိုးဖျက်ဆီးမှုပုဒ်မ ၄၂၇၊ ခြောက်လှန့်မှုပုဒ်မ ၅ဝ၆၊ ပူး ပေါင်းပါဝင်မှုပုဒ်မ ၁၁၄ ဖြင့် ဖရဲ ကျွန်းကျေးရွာသားနှစ်ဦးကို အမှု ဖွင့်ထားပြီး စစ်ဆေးလျက်ရှိသည်။
ရန်ကုန်တွင် တစ်လအတွင်း ကျောင်းကားတင်သွင်းရန်လျှာက်ထားသူ ၃၃ ဦးရှိ
YBS-20 ပေါ်တွင် ခရီးသည်မိန်းကလေးအား ဆဲဆိုကြိမ်းမောင်းခဲ့သည့် ခါးပိုက်နှိုက်အုပ်စုမှ ကျုးလွန်သူ?
ရန်ကုန်- ပြည် ကားလမ်းပေါ်တွင် ခရီးသည်တင်ယာဉ် တိမ်းမှောက်၊ ရှစ်ဦး သေဆုံး
ခရီးသွားလုပ်ငန်းတွင် ဥရောပဈေးကွက် ကျဆင်း၊ မြန်မာ ဧည့်လမ်းညွှန်များ အလုပ်အကိုင်များ သိသိသ??